5 Tilmaamood oo Ku Kordhinaya Ganacsigaaga Moobil | Martech Zone
5 Tilmaamood oo Ku Kordhinaya Ganacsigaaga Mobile
Talaado, Nofeembar 30, 2010 Talaado, September 4, 2012 Douglas Karr
FikraddaLab ayaa soo bandhigtay shan talooyin oo ka caawin doona shirkadaha hagaajinta khibradda moobiilka iyo soo jiidashada macaamiisha cusub:
Ka bilow khibrada isticmaale: Khibrad isticmaale wanaagsan ayaa ah tixgelinta ugu sareysa ee guusha mobilada. Badanaa, shirkaduhu waxay isku dayaan inay ku daydaan waxqabadka degellada dhaqameed ee guryaha guurguura. Si loo hubiyo isticmaalka ugu wanaagsan ee moobiilka, diiradda saar macaamiisha iyo baahiyaha ganacsiga, oo si weyn uga duwanaan kara kuwa webka dhaqameed. Waxyaabaha sida fudud u ah cabbirka badhanka (ma weyna yihiin?) Iyo in la hubiyo inaysan jirin dhinac-u-rogid is-rogis ah ayaa badanaa la iska indhatiraa dadaalka ugu horreeya oo waxaa laga yaabaa inuu hadhsado xitaa waxqabadka ugu weyn. Ku billow dhageysiga macaamiishaada: raadi sida ay rabaan inay ula macaamilaan shirkaddaada aaladda moobaylka iyo sida ay hadda u isticmaalayaan kanaalka moobiilka si ay u gaaraan himilooyinkooda U hubso inaad horumariso barnaamijyada moobiilka ee ku habboon baahida macaamiisha, oo hubi inaad qaabkaaga qaabku u qaadanayo caqabadaha gaarka ah ee khibradda moobiilka tixgelinta.
Ha moodin inaad u baahan tahay barnaamij: Ganacsiyada qaarkood, gabi ahaanba waad sameysaa; kuwa kale, uma qalanto maalgashiga, waxaadna ku fiicnaan doontaa inaad ku maal gashato joogitaanka shabakadaada moobiilka. Miisaamee faa'iidooyinka iyo qasaaraha: Bogagga internetka ee moobiilku waxay leeyihiin rafcaan ballaaran oo suuq ah waxaana heli kara dhammaan noocyada aaladaha moobaylka. Laakiin iyadoo barnaamijyada moobiilku ay gaarayaan dad ka yar boggaga internetka ee mobilada, haddana ganacsiyada badankood waxay doorbidaan kanaalkan suuqgeynta, maadaama ay macaamiisha u siiso khibrad gaar ah oo diiradda lagu saarayo oo loogu talagalay taleefannada casriga ah.
Ha u qaadan in moobilku had iyo jeer macnaheedu yahay mobiil: Hubso inaad siiso xiriir caan ah boggaaga oo buuxa oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu marin u helo. Dalagyada casriga ah ee casriga ah ayaa si sahal ah u mari kara bogagga intarnetka ee buuxa, runta fududna waxay tahay in boggag badan oo moobiillo ah oo keliya aysan siinaynin marin la mid ah astaamaha laga helo websaydhka oo buuxa — sifooyinka ay soo booqdayaal badani rabaan ama u baahan yihiin inay isticmaalaan inta ay socdaan. . In kasta oo ay ku habboon tahay inaad ka eegto dheelitirka xisaabtaada bangiga adoo adeegsanaya bogga mobilada, haddana waxaa muhiim ah in la bixiyo biil iyadoo la adeegsanayo qaybta biil-bixinta ee goob buuxda oo aan waligeed lagu dirin moobiilka.
Ka faa'iideyso tikniyoolajiyadaha moobiilka ee horay u jiray, si loogu xiro dhagaystayaasha moobiilka: Iyadoo aan loo eegin haddii ilaha shirkaddaadu ay sida ugu fiican ugu maal gashan yihiin barnaamijka moobiilka, tiknoolajiyado badan oo horey u jiray ayaa kaa caawin kara inaad ku xirnaato dhagaystayaasha moobiilka iyadoon maalgalin weyn lagu sameynayn horumarinta tikniyoolajiyadda. Caan ka noqoshada adeegyada ku saleysan goobta sida Foursquare iyo Facebook Places ayaa wax ka beddelay habka sumadaha ay ugu suuq geyn karaan macaamiisha mobilada iyagoo u oggolaanaya ganacsiyada leben-iyo-madaafiicdu inay si fudud u aqoonsadaan uguna abaalmariyaan macaamiisha daacadda u ah waxyaabo gaar ah iyo qiimo dhimis. DialogCentral waa tusaale kale oo tikniyoolajiyad moobiil bilaash ah oo dhiirrigelin kaqeyb qaadasho: iyadoo la adeegsanayo aaladdan, macaamiisha ayaa u diri kara jawaab celin toos ah ganacsiyada inta ay socdaan, ganacsataduna waxay heli karaan faallooyinka waqtiga dhabta ah ee macaamiisha oo aan wax lacag ah laga qaadin.
Qaado qaab wax ku ool ah oo lagu cabiro moobiilka: Ganacsiyada badankood maanta uma jiran qalab ay si wax ku ool ah ugu cabiraan dadaalkooda wareega. Marka hore, dib u laabo oo si taxaddar leh uga fiirso waxa la cabbiri karo iyo waxa la cabirayo. Jawiga guurguura, cabbiraadaha la yaqaan hadda lama adeegsanayo, markaa raadi tallaabooyin wax ka qabanaya dhammaan dariiqyada astaantaada casriga ah, sida ka-qaybgalka macaamiisha. Kadib, qeex cabirrada lagama maarmaanka u ah in lagu dabaqo tallaabooyinka noocan ah astaamaha gaarka ah ee ganacsigaaga. Tixgeli ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah, habka jawaab celinta qoraalka oo qayb ka ah barnaamijka cabbiraadda si loo hubiyo inaad ku saleyneyso go'aannada baahida macaamiisha halkii aad ka fikiri lahayd shirkadaha.
Maaddaama macaamiil badani ku tiirsan yihiin aaladooda moobaylka iyo barnaamijyada moobiillada wax kasta oo ka bilaabma dukaamaysiga internetka illaa ballansashada fasaxyada, bangiyada, iyo bixinta biilasha, ganacsiyada waxay u baahan yihiin inay abuuraan khibrad moobiil aan xaddidnayn oo ay dhegeystaan ​​waxa ay macaamiishoodu ka sheegayaan iyaga. Rand Nickerson, Agaasimaha Guud ee OpinionLab
Tags: koritaanka wareegamarketing mobile
Khayaanada Khatarta ah ee Ka Fogaanshaha Shabakada Bulshada
Kama soo horjeedsan karo
Naqshadeynta Websaydhka Moobilka
Qodobbo aad u wanaagsan oo lagu horumariyo ganacsiga mobilka ...